HTC One M8 ကိုအခမဲ့နှင့် S-OFF မည်သို့သော့ဖွင့်ရမည်နည်း။ | Androidsis
S-OFF မည်သို့ရရှိမည်နည်း။ HTC One M8 ကိုမည်သို့သော့ဖွင့်ရမည်နည်း
လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတော့ XDA အသုံးပြုသူများကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပါရစေ အခမဲ့ HTC One M8 သော့ဖွင့်ပါအဲဒါကိုအောင်မြင်ဖို့လုပ်ရမယ် မတိုင်မီတစ် ဦး ယခင်ကအမြစ်တွယ် terminal ကိုရှိသည် သူနှင့်အတူ ပြီးပြီ.
device ရဲ့ root နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကငါထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ tutorial တစ်ခုဆီသို့ Link ကိုထားပြီးပြီ။ အဲဒါကိုလိုက်နာဖို့အရမ်းလွယ်တယ်။ ဖြစ်စဉ် S-OFF, သော bootloader သော့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ၏, ငါကဖြစ်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ် ကျနော်တို့လုပ်ရမယ်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်း terminal ကိုအမြစ်တွယ်နေတခါ။
1 S-OFF ကို HTC One M8 တွင်မည်သို့ရနိုင်သည်
2 HTC One M8 ကိုအခမဲ့သော့ဖွင့်နည်း
S-OFF ကို HTC One M8 တွင်မည်သို့ရနိုင်သည်
သင်လိုအပ် ဒီ tutorial ကိုဆက်မလုပ်ခင် Bootloader ကို unlock လုပ်ပါဒီ၌ post ကိုသင်အလွယ်တကူရရန်ညွှန်ကြားချက်အားလုံးတွေ့လိမ့်မည် mouse ခလုတ်အနည်းငယ်တွင်ဤဗီဒီယိုအပြင် HTC Dev ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြသည်။
ငါအဘို့ငါရှင်းပြသမျှ၏ညွှန်ကြားချက် S-OFF ငါကဒီရင်းမြစ်ကနေသူတို့ကိုယူကြပြီ, ဒါကြောင့်စီးပွားရေးကိုဆင်းကြကုန်အံ့:
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သေချာစေရန်ဖြစ်သည် ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် HTC Driver များထည့်သွင်းထားပါ သင် HTC One ကို PC နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်မိပါက၎င်းကိုလုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ယင်းတို Android ADB ကျွန်ုပ်တို့၏ PC တွင်တပ်ဆင်ထားသည်၊ ၎င်းအတွက်လိုအပ်သည် Android SDK ကို download လုပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ operating system ကိုအရသိရသည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် device ၏တည်ငြိမ်သောအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် Wi-Fi သို့မဟုတ်ဒေတာများမှတဆင့်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
USB debugging HTC One M8 ချိန်ညှိချက်များမှဖွင့်နိုင်သည်။
အားလုံးသော့ခတ်အမျိုးအစားများပိတ်ထားသည်, terminal lock ကိုပုံစံ၊ ပွတ်ဆွဲ၊ စကားဝှက် (သို့) face unlock mode မဖွင့်နိုင်ဘူး၊ အနေအထားမှာဖြစ်ရမယ် အဘယ်သူအားမျှ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ PC မှ HTC Sync ဆော့ဝဲကိုဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ ၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးပြီး၎င်းကိုပိတ်ရန်အတွက်မလုံလောက်ပါ၊ ပရိုဂရမ်ကိုဖယ်ရှားရန်မှာလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
Android Terminal များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်မည်သည့် software ကိုမဆိုရိုက်ထည့်ပါ Samsung Kies, PDA Net စသည်ဖြင့်လုံးဝပိတ်ထားသင့်ပြီးဖြစ်နိုင်လျှင်ဖယ်ရှားပစ်သင့်သည် ကွန်ပျူတာသည် S-OFF လုပ်ငန်းစဉ်၏ချွတ်ယွင်းမှုများမှကာကွယ်ရန်။
HTC One M2.0 ကို USB မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ရန် USB 8 ports ကိုသုံးပါ။
ဒါတွေပြီးတာနဲ့ ကျနော်တို့ကဒီတူညီတဲ့ link ကိုမှ Firewater download လုပ်ပါ နှင့် ငါတို့ execute como system administratorsဟုတ်ပါတယ်၊ HTC One ဟာအရင် PC နဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်။
ငါတို့ကြည့်သင့်တယ် command window ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်အတွက်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရမည့်နေရာများ၊ ခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်းနှင့်ကန့်သတ်ချက်များရှိသောအခြေအနေများအားလက်ခံခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာများ။
HTC One M8 ကိုအခမဲ့သော့ဖွင့်နည်း
ရရ HTC One M8 ကိုအခမဲ့သော့ဖွင့်ပါ နှင့်၎င်းကိုသုံးနိုင်သည် မည်သည့်မိုဘိုင်းဖုန်းကုမ္ပဏီကျနော်တို့သာလုံလောက်ပါလိမ့်မယ် ဒီစာမျက်နှာကိုသွားကြည့်ပါ ငါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာ:
ငါတို့ဖုန်း၏ကီးဘုတ်ပေါ်တွင်ငါတို့ရိုက်ထည့်ပါ * # 06 # ပြီးတော့ငါတို့နံပါတ်တွေကိုချရေးတယ် IMEI မှားဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် configuration file ကို mail ဖြင့်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ config.dat ကျွန်ုပ်တို့သည် HTC One M8 ၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်၏အရင်းတွင်ထည့်သွင်းရမည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် HBOOT mode ကိုပြန်လည်စတင်မည်၊ SimLock ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပြီးပါဝါဖြင့်အတည်ပြုပါ။
ထိုအချိန်တွင်ဖုန်းသည် config.dat ဖိုင်ကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည် မည်သည့်ကုမ္ပဏီအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ sim သော့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်, ထို့ကြောင့် HTC One M8 ကိုလုံး ၀ လွတ်ပြီ။ ¿မင်းရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းဟာအခမဲ့လားဆိုတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ထွက်ရန်ထွက်နိုင်သည် HBOOT သော့ကိုနှိပ် အသံအတိုးအကျယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » S-OFF မည်သို့ရရှိမည်နည်း။ HTC One M8 ကိုမည်သို့သော့ဖွင့်ရမည်နည်း
အော်စကာ Sanchez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ HBOOT mode ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။
Oscar Sanchez အားပြန်ပြောပါ
Walt Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သော့ unlocked htc ကို ၀ ယ်လိုက်ပြီး၎င်းသည် verizon အမှတ်တံဆိပ် (USA) ဖြစ်ပြီး telcel (mexico) အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေသည်။ သို့သော်၎င်းသည် Verizon စက်ရုံလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲ၊ »သူကကျွန်တော့်ကိုပြောတယ်။ Hot spot (internet sharing) ကိုသုံးဖို့ verizon chip ရှိဖို့လိုတယ်၊ ငါ့မေးခွန်းကငါ့ htc M8 ဆဲလ်ဖုန်းကို root လုပ်ရင် hotspot တစ်ခုအနေနဲ့သုံးလို့ရမလား။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ။
walter Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
ဟယ်ဝေါလ်တာ၊ ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်မယ် ... ပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မလား?
ကျွန်ုပ်၏ Sprint htc one m8 တောင်မှကျွန်ုပ်၏ SIM ကိုအသိအမှတ်မပြုပါ
Alberto, မင်းရဲ့ Sprint Htc ကိုသော့ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီလား။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ Sprint HTC သည်ကျွန်ုပ်၏ telcel SIM ကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်လျှင်၎င်းသည်ကွန်ယက်ကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေရန်သာသတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်း၏နောက်ကင်မရာသာရပ်တန့်သွားသည်။ အခြားအရာအားလုံးအကြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ Sprint HTC သည်ကျွန်ုပ်၏ telcel SIM ကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်လျှင်၎င်းသည်ကွန်ယက်ကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေရန်သာသတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်း၏နောက်ကင်မရာသာရပ်တန့်သွားသည်။ အခြားအရာအားလုံးအကြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ဘယ်လိုနေလဲ။ ကျွန်ုပ်တွင် At&T မှ m8 ဖြန့်ချိခဲ့သော်လည်း၎င်းကိုမွမ်းမံလိုပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤအဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်အကြံပြုလိုသည်ရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်မသိရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်တယ်လီဖုန်းတစ်ခုအနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ & t လိုဂိုက startup မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
Ricardo Sosa ကိုပြန်ပြောပါ
ငါမှာ htc one m8 sprint ရှိတယ်။ နင့်ကိုနစ်မနုပ်မလွှတ်နိုင်ဘူးကူညီပေးပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အကူအညီလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် htc m8 ဖုန်းရှိသည်။ သူတို့သည်မိုဘိုင်းဖုန်းဖြစ်သော်လည်းသူတို့ကကျွန်ုပ်အားဖြန့်ချိပေးသည်၊ ခဏအလုပ်လုပ်သည်၊ ထို့နောက်၎င်းသည်သတင်းပို့ထားသည့်အတိုင်းအချက်ပြမှုကိုရပ်တန့်လိုက်သည်၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကကျွန်ုပ်အားကူညီလိမ့်မည်၊ HBOOT စနစ်သို့ ၀ င်ရန်သင်၏အာရုံစိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
သူတို့က Firewater link ကိုအမှားလုပ်မိသောကြောင့်အမှားလုပ်နိုင်ပြီး download လုပ်၍ မရပါ။
gustavo agustin barba ဟုသူကပြောသည်
ဟဲလိုငါ့မှာ AT&T မှာ htc m8 mXNUMX ရှိတယ်။ ပြီးတော့ငါ telcel sim ကိုထားလိုက်ပြီး၊ ငါဘယ်လိုရလဲဆိုတာကုဒ်တစ်ခုမေးတယ်။
gustavo agustin barba အားပြန်ပြောပါ
Orester Flores ဟုသူကပြောသည်
Orester Flores သို့စာပြန်ပါ
Android ၏ဖြစ်ရပ်မှန် - HTC Dream သည်ပထမဆုံး Android မိုဘိုင်း (၂၀၀၈)
ပြိုလဲနေသောကောင်းကင်တမန်ကိုကောင်းကင်မှကယ်တင်ရန် Deemo ဖြစ်လာသည်